Dhageyso: Madaxa guddiga aqalka sare ee Kismaayo oo la saftay Axmed Madoobe - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Madaxa guddiga aqalka sare ee Kismaayo oo la saftay Axmed Madoobe
Dhageyso: Madaxa guddiga aqalka sare ee Kismaayo oo la saftay Axmed Madoobe
Kismaayo (Caasimada Online) – Weli waxaa Magalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubbada Hoose ku sugan wafdigii Aqalka sare ee xal raadinta, kuwaas oo soo geba gabeeyey kulamadii ay la lahaayeen Madaxda iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Jubbaland.
Guddiga ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in wahadaladaas loogu soo bandhigay in dowladda federaalka Soomaaliya faragelin ku heyso Jubbaland, isla markaana dhibaato xoogan ay kala kulmayaan dowladda.
Senator Axmed Xaashi oo madax u ah Guddiga Aqalka sare ee loo diray Kismaayo, si xal looga gaaro khilaafka dowladda iyo Jubbaland ayaa la saftay maamulka Axmed Madobbe, isaga oo sheegay in dhammaan mas’uuliyiintii iyo bulshadii ay la kulmeen ay sheegeen inay faragelin ku heyso dowladda Federaalka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in dowladda ay ku eedeynayeen inaysan aqoon isku-soo dhawaasho, balse ay taqaano sii riixis oo ay kala fogeyneyso Shacabka iyo Maamulka Jubbaland.
Waxa uu ugu baaqay dadka ku nool deegaanada Jubbaland inay ka fogaadaan in dhexdooda dhibaatooyin la kala dhex dhigo,i sla markaana ay u sabraan cadaadiska uga imaanaya dowladda Federaalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay.
Dhageyso Codka Senator Axmed Xaashi